Hong Kong: Nihemotra ny volavolandalàna momba ny fifidianana…………. Resak’alika izany! · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 15 Febroary 2009 20:38 GMT
Tao amin’ny fivoriana momba ny filan-kevi-pifidianana miendrika fanontaniana-sy-valiny dia niteny ny filohan’ny mpanatanteraka Donald Tsang fa hahemotra any amin'ny telovolana fahaefatra ny volavolam-pifanaraham-pifidianana amin'ny taona 2012 hiatrehana ny toekarena sy ny fiainana andavanandron'ny olona.
Nahemotra ny fifidianana.
Raha ny tokony ho izy dia tokony natao tamin’ny voalohandohan’ny taona 2009 ny fivorian'ny parlemantera, nanakiana ny fandaharan'i Donald Tsang hanemotra ny fombafomban'ny manjakavahoaka reehtra ao Hong Kong I Ronny TONG Ka-wah. Namaly I Donald Tsang (araka ny feon-gazety ao an-toerana sy ny blaogin'i plastichk
Ka izahay anie…. Na ny tenako dia tsy te hiditra anaty “adi-hevitr’alika”, izay no voalazan’ny mpahay lalana Ronny Tong, tsy namanantena izany velively aho….
Nanjary lasa fifamaliana an-kabary ny “ny resak’alika”
Ny “resak’alika” amin’ny teny Cantonese dia fomba fiteny madio azo asolo ny “taimbava”. Betsaka ny olona nijery vaovao mivantana no sahirana ny hino fa nisy tokoa ve ireo zavatra izay henony sy mahavalalanina azy ireo izany. Tao aoriana kely, tao amin’ny antontan-taratasin’ny governemant nandritra ny fivorian'ny solombavam-bahoaka ny teny hoe“resak'alika” dia nosoloina hoe “adin-kabary”. Nanjary ho ady hevitra mavesatra ao amin’ny aterineto ny fanononana hoe “alika” na hoe “ady”.
Isaorana ny haitaom-pampitam-baovao, Nampiditra horonantsary kely ny mpiserasera iray mba hanaporofoana ny “resak'alika”n’I Donald Tsang, ity ny anankiray natsofoky aimak:
Ekena fa mahamenatra ho an’ny governemanta ny hanova ny “resak'alika” ho lasa hoe “adin-kabary” ao amin’ny antontan-taratasy ofisialy, raha toa ka ny mpanatanteraka no mampiseho tsy fanajana ny mpanao lalàna Ronny Tong, dia etsy andaniny kosa rehefa avy eo ny fanontanian’I Ronny Tong izay mikasika fifandaminan-kevitra dia tena mahery loatra . Fanampin'izany koa ny fanakianana nataon’I Donald Tsang tamin’ny mpanao lalàna vondron'ny mpandala ny demokrasia ara-tsosialy (ligue de la Democratie Sociale) ka nampiasainy teny tsy misy fiheverana sy tsy nisy fanajana (Tazonin’izy ireo ihany ny fomba filaza hoe “akondro” mba hilazana ny politikany), amin’ny lafiny iray dia be ny fampiasany teny mitovitovy, raha tsy hilaza mihoatra izany, izay maniratsira ireo mpanao lalàna hafa.
Manakiana ny foto-kevitra fitan-droa nataon'ny gazety, raha noraisin'ny gazety tao an-toerana roa ny tantaran'ny ‘resak'alika’, I Paulymh avy ao amin’ny Immediahk, raha toa ka nijery akaiky ny kiana nataon’ny Donald Tsang momba ny tsy fahaiza-miara-miasa aminy ny ao amin'ny mpanao lalàna LSD ao amin'ny antenimieera.
Lalana fototra faha-79 milaza ny fanipazana ny akondron'ny LSD
Avoitran'i Wong Onyin, manam-pahaizana manokana momba ny lalànan'ny Blaogy , ny paik’adin’ny governemanta, fa ny mamphihatra ny lalana fototra faha-79, andalana faha-7 amin’ny mpanao lalànan'ny LSD ny mpanohana ny fitondrana:
Ny lalana fototra dia miteny fa raha tsy mahay mitondra tena ny mpanao lalàna iray, ka manameloka izany ny ny roa ampahatelon’ny mpikambana ao amin’ny antenimiera, dia mamoaka didy ny filoha manala ny fahefana eo amin’io mpanao lalàna io. Tsy misy anefa ny fanazavana milaza ny fomba entina hanombohana izany, fa kosa araka ny ny fomba fanao izay nisy, dia hoe, raha toa ka efa nahazo fampitandremana in-telo ilay olona dia afaka atomboka avy hatrany ny hetsika manameloka azy.
Efa nampiditra taratasy any amin’ny filohan'ny antenimiera ny Sekretera ambony ao amin’ny fitantanan-draharaha hanoherana ilay fitorahana akondro tamin’ny Oktobra 2008 sy ny teny tsy voahevitra tamin'izany fotoana izany. Efa voarakitra ireo fitarainana roa ireo, koa raha misy ny fitarainana iray fanampiny, dia afaka miangavy ny filohan'ny antenimiera ny governementa mba hampidirana ny fombafombam-panonganana entin’ny mpanao lalànan'ny DAB (antoko mpanohana), manameloka ny mpanao lalàna ay ao amin'ny LSD Wong Yuk Man.
Raha toa ka ny fifanarahana tahaka ny filan-kevitry ny fifidianana no nanjary “resak’alika” eo imason’ny (fitsarana an-tampony), Inona ary izany no ilana ny aomieran'ny fanaovan-dalàna? Eny fa na dia mandravarava aza ny adin’alikan’ireo mpanao lalàna avy ao amin'ny LSD, Mety ho afaka manorina tokoa ve ny adihevitra ao amin'ny vaomieran'ny fanaovan-dalàna raha tsy ao anatin'ny rafitra tsy demokratika?